Miara-miasa amina orinasa i Google Play hamarana ny malware | Androidsis
Google Play dia hiasa amin'ny ESET, Lookout ary Zimperium hiadiana amin'ny malware
Eder Ferreño | | About us, fiarovana
Malware dia mbola olana mahazatra ao amin'ny Google Play. Amin'ny tranga mihoatra ny iray, fampiharana izay manana karazana virus na fandrahonana ao amin'ny fivarotana. Noho io antony io dia efa niasa nandritra ny fotoana elaela i Google tamin'ny karazana fepetra rehetra, hiadiana amin'ity olana ity. Ny orinasa dia manambara fiaraha-miasa amin'ny ESET, Lookout ary Zimperium.
Amin'ny alalàn'ity fiaraha-miasa ity, antsoina hoe App Defense Alliance, dia mitady izany miady amin'ny malware amin'ny fomba mahomby kokoa ao amin'ny Google Play. Ka hanana valiny haingana kokoa ianao ary ho tsikaritra alohan'ny hahatratrarany ny mpampiasa. Mety ho dingana lehibe amin'io lafiny io ho an'ny orinasa izy.
Nifidy tsara ireo mpiara-miasa aminy ny orinasa. Lookout no mpamorona ny Lookout Antivirus, Zimperium dia orinasan-tsaina manokana amin'ny fiarovana ary ESET no tompon'andraikitra amin'ny NOD32. Izy rehetra dia miara-miasa amin'ny Google, amin'ny alàlan'ny Play Protect, mba hanampiana amin'ny famoahana malware amin'ny Google Play amin'ny fomba mandaitra kokoa.
Ny hevitra dia ny famoronana rafi-pifandraisana roa misy eo amin'i Google sy ny sisa amin'ireo orinasa. Misaotra an'io ihany fampahalalana momba ny fandrahonana dia azo zaraina na fandrahonana mety hitranga. Azo atao koa ny mizara ny valin'ny fitsapana sy ny detection, mba hihatsara ny rafitra rehetra.
Ho fanampin'izay, hizara amin'ireo rindranasa miandry ny famoahana ao amin'ny Google Play i Google. Hanampy izany mamantatra malware na loza mitatao mety hitranga izany dia ao amin'ilay fangatahana voalaza. Amin'izany fomba izany, voasakana tsy ho tonga any amin'ny magazay ity rindranasa ity ary hampidina azy ireo amin'ny findainy ireo mpampiasa.
Amin'ny taratasy dia toa tetikasa tsara izany, izay tokony hanaisotra ny malware amin'ny Google Play amin'ny farany. Ny fanontaniana dia ny hoe hiasa amin'ny fampiharana sy ny toa izany, na ny orinasa hamela antsika manana tetikasa manana banga sasany. Ho hitantsika ny fomba fiasa ao anatin'ny volana vitsivitsy. Inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Google Play dia hiasa amin'ny ESET, Lookout ary Zimperium hiadiana amin'ny malware
Hanolotra andiana fanovana maromaro ny Twitter amin'ny taona 2020
Miaraka amin'ny fakantsary aoriana mahaliana sy famolavolana firazanana, ny Vivo S5 dia hita ao amin'ny afisy ofisialy vaovao